Xiaomi Mi 11T Pro: mety ho fampiasa, famaritana, vidiny ary daty famoahana | Androidsis
Xiaomi Mi 11T Pro: mety ho fiasa, famaritana, vidiny ary daty famoahana
Aaron Rivas | 23/08/2021 00:53 | Nohavaozina amin'ny 23/08/2021 00:56 | About us, Xiaomi
Xiaomi dia manomana ny famoahana smartphone vaovao, ary momba ny Ny 11T Pro ahy, finday avo lenta izay ho lasa andiany mandroso indrindra amin'ny mpamokatra sinoa hatramin'izao.
Ary io dia efa be ny resaka ny toetra sy ny fepetra arahana teknika an'ity fitaovana ity, noho izany dia efa fantatsika izay antenaina amin'izany, ary koa ny antsipiriany momba ny vidiny mety sy ny daty fandefasana izay hireharehan'ity finday avo lenta ity.
1 Ireo toetra sy fika teknika rehetra fantatsika hatreto amin'ny Xiaomi Mi 11T Pro
2 Ny vidiny sy ny daty famotsorana ny Xiaomi Mi 11T Pro
Ireo toetra sy fika teknika rehetra fantatsika hatreto amin'ny Xiaomi Mi 11T Pro
Araka ny fivoahana sy vinavina tato ho ato izay, ny Xiaomi Mi 11T Pro dia ho finday avo lenta izay hamely ny tsena amin'ny efijery teknolojia AMOLED izay hanana taha-pahavitrihana 120 Hz. Io dia hamela ny malama sy ny fitoniana hitombo kokoa raha ny amin'ny fivezivezena ao amin'ny interface, ny fampiharana ny fampiharana sy ny lalao ary ny fanaovana asa hafa amin'ny resaka atiny multimedia.
Amin'ity lafiny ity, ny Xiaomi Mi 11T Pro dia hanana tontonana misy zana-kazo mihena, toy ny ananantsika azy ireo amin'ireo maodelin'ny Wed 11. Ho fanampin'izay, hanana ny lavaka ao amin'ny efijery ihany koa izy amin'ny zoro ankavia ambony, hipetrahany sensor fakan-tsary eo anoloana izay mety ho vahaolana 20 MP, toy ny Mi 11 tany am-boalohany, ka amin'ity lafiny ity dia tsy hisy fiovana vaovao.
Mikasika ny fakantsary aoriana amin'ity finday ity dia hampiasa ny Xiaomi Mi 11T Pro, araka ny tatitra, rafitra telo izay ahafahana misafidy mpitifitra 108 MP. Na izany aza, voalaza fa ity finday ity dia mety hanana fanapahan-kevitra 64 MP ambany, na dia toa tsy azo inoana aza izany. Mbola hita ihany izany.
Raha ny momba ny fakantsary fakantsary hafa, ny telefaona dia mety hanana modely telo koa misy sensor 13 na 8 MP ny zoro ary fakan-tsary 5 MP. Raha toa ka miaraka amina modely quad, ny sensor farany dia mety ho 2 MP ary natokana ho an'ny effet blur eny an-tsaha. Ho fanampin'izany, ny telefaona dia hanana flash LED indroa koa amin'ny jiro amin'ny alina ary toerana tena mahantra ny jiro.
Ny chipset processeur hampiasain'ity telefaona ity dia ilay Qualcomm Snapdragon 888, sombin-kery izay manome tanjaka an-dakilasy avo lenta, manao an'ity finday ity ho avo lenta tanteraka. Ary ity SoC ity dia afaka miasa amin'ny refin'ny famantaranandro faratampony 2.84 GHz, avy eo miaraka amin'ny Adreno 660 GPU, ilay matanjaka indrindra amin'ny atiny multimedia sy lalao avo lenta.
Etsy ankilany, ity finday ity dia havoaka miaraka amin'ny Fahatsiarovana RAM misy 6 na 8 GB. Mbola ho hita eo raha ho hita amin'ny dikan-teny roa izy io, ary koa raha atolotra miaraka amin'ny 128 sy / na 256 GB ny toerana fitahirizana anatiny. Mazava ho azy, tsy antenaina ny hahatongavan'ny fanohanana amin'ny fanitarana ny fahatsiarovana amin'ny alàlan'ny karatra microSD, satria hatramin'ny andiany Mi 10 ka hatramin'ny Mi 11, izay ankehitriny dia tsy tazana na aiza na aiza izany.
Amin'ny lafiny iray, ny bateria dia mety hanana 5,000 mAh, izay mendrika tokoa. Mazava ho azy, tsy ao anatiny ny tsara indrindra, fa amin'ny haitao haingam-pandeha haingana izay hampiarahan'ny Xiaomi Mi 11T Pro, izay 120 W. Amin'izany, ny bateria dia halefa avy amin'ny foana hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 40 minitra. Mazava ho azy fa ny input dia USB type C.
Ny endri-javatra hafa amin'ny Xiaomi Mi 11T Pro dia mety ahitana mpamaky rantsantanana ambanin'ny efijery sy ny rafitra fiasa Android 11 eo ambanin'ny MIUi 12.5 ho toy ny sosona fanaingoana. Ny zavatra hafa mety hananan'ny telefaona dia ny fifandraisana 5G, satria ny Snapdragon 888 izay hananany ao anatiny dia miaraka amina modem tafiditra afaka manohana an'ity tambajotra ity.
Mazava ho azy, tsy hanana fanoherana rano izy io, fa ho voaro miaraka amin'ny Corning Gorilla Glass veraNy vera mafy indrindra an'i Corning hatramin'izao; ity dia ho fitaovana any aoriana ary, mazava ho azy, ambonin'ny efijery an'ny fitaovana. Ho tonga miaraka amin'ny NFC ihany koa izy amin'ny fandoavana fandoavam-bola tsy misy fifandraisana, famerenana amin'ny laoniny, ary sensor infrared amin'ny fifehezana ireo fitaovana ivelany toy ny fahitalavitra sy maro hafa.
Ny vidiny sy ny daty famotsorana ny Xiaomi Mi 11T Pro
Ity finday ity dia antenaina ho avo lenta, saingy amin'ny vidiny mirary, raha ampitahaina amin'ny Mi 11 sy Mi 11 Pro. Noho izany dia miresaka momba izany izahay mety hamely ny tsena eo amin'ny 600 euro eo izany. Saingy, azo inoana fa halefa voalohany any Sina izy io, ka io vidiny io no mifanaraka amin'ny fiovan'ny fotoana. Ankoatr'izay, ny 23 septambra no andro kendrena hanombohana azy, na dia hamafisinay aza na holavinay avy eo raha tena hapetraka manerantany izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi Mi 11T Pro: mety ho fiasa, famaritana, vidiny ary daty famoahana